नेपाल आज | गाडी ठोक्कियो, के गर्ने ?
अमेरिकामा गाडीले ठोकेर भाग्नु अर्थात हिट एन्ड रनलाई ठूलै अपराध मानिन्छ । तपाईं अमेरिकाको कुनै पनि राज्य वा कुनै पनि स्थानमा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कथंकदाचित तपाइले अर्को गाडीलाइ ठोक्नु भयो वा तपाईंलाई कुनै अर्को गाडीले ठोकिदियो भने कुनै पनि हालतमा गाडी यताउता नसार्नु होला प्रहरीको आगमन नभएसम्म । तर, गाडी चल्न सक्ने अवस्था छ र हान्ने र हानिने दुवै गाडीका ड्राइभर एवं प्यासेन्जर मध्ये कसैलाइ पनि चोटपटक वा हर्ट नभएको अवस्थामा दायाँ साईडमा गाडी लगि पार्क गर्न सकिन्छ । तर गाडी चल्न नसक्ने वा गाडीको प्यासेन्जर कसैलाइ हर्ट भएको अवस्थामा गाडी जहाँ दुर्घटना भएको हो त्यहीँ बस्नुहोस र अर्को गाडी कुन अवस्थामा छ र दुर्घटना कस्तो भएको हो वा कसैलाइ दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेको भए वा नभएको हेरी दुवै ड्राइभरको सल्लाहमा प्रहरी बोलाउनुहोस् ।
तर, तपाईंले कसैको गाडी हानी यताउति हेरी लुक्ने, भाग्ने काम नगर्नु होला । यो ठूलो अपराध हो । हिट एन्ड रन री समातिनु भएको खण्डमा तपाईं घटनाको स्थिति हेरी मिसेडेनियरदेखि फेलोनीसम्म सजायमा पर्नु हुनेछ । जसबाट तपाईं जेल जानुपर्ने, ठूलै जरिवाना हुनसक्ने, तपाईंको इन्सुरेन्सले क्यान्सिल गर्न सक्ने, तपाईको ड्राइभर लाइसेन्स खारेजसम्म हुन सक्नेछ । यो ठूलो सजाय हो । तपाईंको पहिलो कर्तव्य के हो भने जहाँ जे जस्तो अवस्थामा गाडी ठोक्किएको हो र हानिएको हो, त्यहीँ बसेर प्रहरीसंग कुराकानी र छिनोफानो नभई कुनै पनि हालतमा दुर्घटना स्थलबाट नहिँड्नु होला ।
तर, गाडी चलाउँदा चलाउँदै कुनै गाडीले ठोकेर हिँड्यो र भागेमा के गर्ने त ?
यो कठिन परिस्थिति हो र यो सबैभन्दा चुनौति पनि । सर्वप्रथम गाडीले हिर्काएर भागेमा तपाईंको आँखा र दिमाग चनाखो बनाउनुहोस् । सकेसम्म उक्त गाडीको प्लेट नम्बर, गाडीको मोडल, गाडीको प्रकार, गाडीको रङ्ग र गाडी कुन कम्पनीले बनाएको हो, त्यो टिप्नुहोस । क्यामेरा सेलफोनले खिच्नुहोस । त्यसपछि गाडी साई ड लगाउनुहोस र प्रहरी बोलाएर रिपोर्ट गर्नुहोस । बाँकी काम प्रहरीले गर्नेछ । तर, तपाईंले गाडीको हुलिया र नम्बर टिप्न भ्याउनु भएन, पिक्चर खिच्न भ्याउनु भएन, गाडीको मोडल टिप्न भ्याउनु भएन भने के गर्ने ?
गाडी जहाँको त्यहीँ रोक्ने वा तुरुन्तै साइड लगाएर विटनेस साक्षीको सहयोग लिनुहोस, यदि अर्को ड्राइभरले देखेको छ र उसले नम्बर वा हुलिया टिपेको हुनसक्छ । अगाडि वा पछाडिको गाडीले यस्तो अवस्थामा ठूलो सहयोग गर्नेछ अमेरिकामा । उस्तै परे अर्को थर्ड गाडीले चेस गरी पत्ता लगाइदिन सक्दछ । ति विटनेसवालाको सम्पर्क नम्बर टिप्नुहोस । प्रहरी वा अदालतलाई आवश्यकता पर्न सक्दछ ।
अब विटनेस पनि भएन, तपाई एकलासमा हुनुहुन्छ र अर्को गाडीले हिट एन्ड रन गरि भागेर गयो भने गाडीको कसमसेकम कुनै एक वा सो भन्दा बढी हुलिया टिपेर प्रहरी बोलाउनुहोस् । तर घटनाको ठाउँ पटक्कै नछोड्नुहोस् । प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्ने र तुरुन्तै तपाईंको आफ्नो इन्सुरेन्सलाई पनि रिपोर्ट गरी जानकारी गराउनुहोस् । प्रहरीको रिपोर्ट पाउनासाथ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई पठाउनुहोस् । यसबाट तपाईको इन्सुरेन्स लायाबिलिटी मात्र छ भने पनि तपाईंको गाडीको मर्मत र क्षति ब्यहोरिदिन सक्दछ ।
तर, तपाई सपिङ्ग वा ग्रोसरी किन्न जानु भयो, काममा जानु भयो तपाईंले पार्क गरिरहेको गाडी काम वा सपिङ्ग वा भोजबाट फर्केर आउँदा सधैं गाडीको सबै भाग हेर्नुहोला । यदि कसैले तपाईंको गाडी हानेर वा क्षति बनाएर हिँडेको छ भने तुरुन्त प्रहरी बोलाएर रिपोर्ट लेखाउनुहोस् । र तुरुन्तै आफ्नो इन्सुरेन्स कम्पनीलाई हिट एन्ड रन र तपाईंको गाडीको क्षतिको जानकारी दिनुहोस् । केही दिनमा प्रहरीको रिपोर्ट पाएपछि इन्सुरेन्स कम्पनीलाइ पठाइदिनुहोस् । उनीहरुले टेक केयर गर्नेछन् । कहिलेकाहीँ इन्सुरेन्स कम्पनी आफैंले जुन प्रहरी शाखा वा विभागको हो, त्यहीबाटै आफैं रिपोर्ट मगाउन सक्दछ ।
कुनै कुनै समयमा हिट एन्ड रन गर्ने गाडी वा ड्राइभर फेला नपर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा इन्सुरेन्स कम्पनीले नै गाडी मर्मत गरिदिनेछ । तर, तपाईंको इन्सुरेन्सले व्यहोर्न मानेन वा तपाईंको गाडीको क्षति वा मेडिकल बिल तिर्न मानेन भने कहिलेकाहीँ सम्बन्धित क्षेत्रको वकिल लगाउनु पर्ने हुन्छ र इन्सुरेन्स कम्पनीलाइ सु गर्न सकिनेछ ।